धूम्रपान र सुर्तिजन्य वर्मन्टको LGBTQ समुदायको लागि मद्दत
घर » Vermonters » म छोड्न चाहन्छु » LGBTQ
LGBTQ को लागी निःशुल्क र सहयोगी क्विट मद्दत
तपाईं सुर्तीजन्य छोड्न यति बलियो हुनुहुन्छ। LGBTQ समुदायले सिधा / सिसिन्डर जनसंख्या भन्दा उच्च दरमा धूम्रपान गर्दछ, तर LGBTQ व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन कठिनाईहरू पार गर्दछन्। तपाईं पनि सुर्तीजन्य लतलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग धुम्रपान र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरू छोड्न मद्दत गर्न हामीसँग संसाधनहरू, उपकरणहरू र अनुकूलित कार्यक्रमहरू छन्।
LGBTQ को लागी मिल्ने स्वास्थ्य देखभाल प्रदायक खोज्नुहोस् वर्मोंट विविधता स्वास्थ्य परियोजना । सदस्य अभ्यासहरू LGBTQ समुदायमा भएकाहरूको लागि सुरक्षित, पुष्टि, सहयोगी र प्रभावशाली ठाउँहरू हुन प्रतिबद्ध छन्।
802०२ क्युटबाट अन्त्य गर्न मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्। अनुकूलित छोड्ने मद्दतको बारेमा थप जान्नुहोस्नि: शुल्क निकोटिन प्याचहरू, गम र लोजेन्ज सहित.
केहि सरल चरणहरूको साथ छोड्नको लागि तयार हुनुहोस्, जस्तै तपाईंको घर, कार्यस्थल र कार तयार गर्न। कसरी तयारी गर्ने सिक्नुहोस्.
भ्रमणको राष्ट्रिय LGBTQ तम्बाकू सम्बन्धित क्यान्सर नेटवर्क .
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको बारेमा कुरा गर्नुहोस् दबाइहरु र मद्दत छोड्नुहोस् जुन तपाईंको लागि उत्तम हो।
यदि तपाईं सुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने:
कल १-1००-अहिले नै एक मा एक कोचिंग को साथ नि: शुल्क अनुरूप छोड्नुहोस् मद्दतको लागि;
अनलाइन छोड्नुहोस् उपकरण बोर्डहरू जस्तै सन्देश बोर्डहरू, योजना छोड्नुहोस् र प्रगति ट्र्याकिंग छोड्नुहोस्।